काभ्रेका प्रजिअ विवादमा, भन्छन् – बोक्सी आरोपमा महिला मारिएको थाहा छैन !
काठमाडौं, २६ मंसिर – सामाजिक अन्धविश्वास र कुप्रथाको चरम रूप बोक्सीको आरोपमा एक महिला मारिँदा पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी कति संवेदनहीन, गैरजिम्मेवार र लाचार हुन सक्छन् भन्ने पछिल्लो उदाहरण बनेका छन् काभ्रेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवप्रसाद सिम्खडा ।
काभ्रेको सानोथवाङ–७ की लक्ष्मी परियार बोक्सीको आरोपमा मारिएको तीन दिन बितिसकेको छ । सोही घटनालाई लिएर सामाजिक सञ्जाल र समाजमा तरंग पैदा भएको छ । तर त्यहाँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिम्खडाले त्यसबारेमा आफू जानकार नभएको गैरजिम्मेवार र लाचार प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
लोकान्तरसँगको कुराकानीका क्रममा उनले आज (आइतवार) बिहान साढे ११ बजे उक्त घटनाका बारेमा पत्रिकामा पढेर मात्र थाहा पाएको बताएका थिए । जबकि परियारलाई स्थानीय शिक्षक हीरा लामाको नेतृत्वमा गत मंगलवार त्यहीँको सूर्योदय माविको प्राङ्गणमा रहेको पोलमा बाँधेर मलमूत्र खुवाएपछि निर्घात कुटपिट गरिएको थियो ।
त्यसको तीनदिन अर्थात् गएको शुक्रवार परियारको मृत्यु भयो । मृत्यु हुनुअघि स्थानीय चौवास प्रहरी चौकीका प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई) प्रेम चौधरीले महिलालाई यातना दिएर कुटपिट गर्ने शिक्षक लामाबाट प्रभावित भई मिलापत्र गराउने निर्णय लिए । जबकि कानूनमा बोक्सीको आरोपमा कसैमाथि कुटपिट र यातना दिने काम भए त्यस्तो घटनाको अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारवाही हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
तर चौधरीले अन्यायमा परेकी परियारले नै शिक्षक लामालाई ६ हजार तिर्ने गरी मिलापत्र गराउन लगाएका थिए । त्यो निर्णय गराइरहँदा परियार भने बेहोश भएर घरमै लडिरहेकी थिइन् । उक्त विद्यालयका अन्य शिक्षक, विद्यालय व्यवस्थापन, गाउँले र अन्य स्थानीय वासिन्दा पनि रमिते बनेका थिए जतिबेला परियारलाई लामा नेतृत्वको टोलीले दिसा खुवाइरहेको थियो, कुटिरहेको थियो ।
आइतवार बिहान १२ बजे लोकान्तरले सम्पर्क गरेपछि प्रजिअ सिम्खडाले घटनाका सम्बन्धमा अब सोधपुछ गर्ने बताएर हल्का, लाचार र गैरजिम्मेवार जवाफ दिएका थिए । उनले यो घटनालाई यति हलुका ढंगले लिएको पाइन्थ्यो मानौं कि गाउँमा केही पनि भएको छैन ।
मान्छे कुटिएको छैटौं दिन भइसक्यो । कुटिएको मानिस मरेको पनि तीन दिन भइसक्यो । तपाईंलाई यसबारेमा अझै जानकारी छैन ? भन्ने लोकान्तरको प्रश्नमा प्रजिअ सिम्खडाले स्पष्ट जवाफ दिएनन् । काइते र आलटाले जवाफ दिँदै उनले भने, –‘आज (आइतवार) को पत्रिकामा निस्केको समाचार पढेपछि मात्र घटनाबारे थाहा पाएँ । अब विस्तृतमा बुझ्ने प्रयास गर्छु ।’
एकजना प्रमुख जिल्ला अधिकारीले निर्दोष सर्वसाधारणको ज्यान गएको तीन दिनसम्म कुनै सूचना राख्दैन । सोधपुछ गर्दैन । अनि अपराधीहरू हावी नभएर यो समाजमा अरू को हावी हुन्छ त ? अपराध नमौलाएर के मौलाउँछ ?
उनले आधा घण्टापछि सम्पर्क गर्न आग्रह गर्दै त्यसपछि मात्र आफूले विस्तृतमा जानकारी गराउन सक्ने जवाफ लोकान्तरलाई आइतवार बिहान साढे ११ बजे दिएका थिए ।
आधा घण्टा होइन, उनीसँग कुरा भएको चार घण्टापछि आइतवार दिउँसो ४ बजे लोकान्तरले प्रजिअ सिम्खडालाई फेरि सम्पर्क ग—यो । घटनामा प्रहरीको पनि शंकास्पद भूमिका भएको, प्रहरीले महिला कुट्ने शिक्षक लामालाई संरक्षण गरेको, असई नै महिला कुट्ने शिक्षकसँग जाँड खाँदै गरेको भेटिएको, कुटिएपछि महिलालाई उपचार गर्न अस्पताल लैजाने काम नभएको, त्यसमा स्थानीय र प्रहरी प्रशासन कसैले पहल नगरेको लगायतका प्रश्न लोकान्तरले प्रजिअलाई सोध्यो ।
प्रजिअ सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख प्रशासनिक अधिकृत हुन् । उनैको नेतृत्वमा जिल्लाको सुरक्षा र व्यवस्था चलेको हुन्छ । त्यसैले प्रजिअ समक्ष यस्ता प्रश्न सोधिएका हुन् ।
तर लोकान्तरले आइतवार साँझ गरेका यी प्रश्नको जवाफ प्रजिअले दिन चाहेनन् । उनको साँझपखको जवाफ पनि गैरजिम्मेवारीपूर्ण थियो । उनको भनाई थियो, ‘पत्रिकामा लेखिएका सबै सत्य हुन्छन् भन्ने छैन । अनुसन्धान हुँदैछ ।’
घटनापछि सोधिने प्रायः प्रश्नको जवाफ अनुसन्धान हुँदैछ भन्ने आउँछ । तर काभ्रेका प्रजिअ यति रुखो र गैरजिम्मेवार रूपमा प्रस्तुत भए, मानौं गाउँमा केही भएकै छैन, मानिस मर्नु कता हो कता ?
जनताले तिरेको करबाट सेवा सुविधा लिएर जिम्मेवार कुर्सीमा बसेको प्रजिअ जस्तो व्यक्तिले यस्तो लाचार प्रदर्शन गरेपछि गाउँको निर्दोष नागरिकले कहाँबाट न्याय पाउने ? के यस्ता गैरजिम्मेवार प्रजिअ, उनको निर्देशनमा जिल्लामा चल्ने प्रहरी प्रमुख र सम्बन्धित अधिकारीलाई पनि कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्दैन ? लोकान्तरको धारणा छ – बोक्सीको आरोपमा लक्ष्मी परियार मारिएकी हुन् । मरेकी होइनन् । उनको मृत्यु कालगतिले भएको देखिँदैन । यो घटनाको गम्भीर र मिहिन अनुसन्धान हुनुपर्छ । प्रजिअ, प्रहरी अधिकारीहरू, शिक्षक लामा, रमिते अन्य शिक्षक र गाउँलेलाई पनि छानबीनको दायरमा ल्याउनुपर्छ । जो दोषी पाइन्छन्, उनीहरूमाथि कडा कारवाही हुनुपर्छ ।